Ukusasazeka kweForex Ziyintoni? Isikhokelo sikaJanuwari 2022 ku-LOW Spread Brokers
Yintoni eyasasazwayo kwi-Forex? Ungasifumana njani isikhokelo sokuSasazeka kwe-Forex esezantsi ngo-2021
Ukusasazeka kwe-Forex, nokuba awuzange urhwebe isibini esinye se-forex, kusenokwenzeka ukuba uvile 'ngokusasazeka'. Ngeyona ndlela isisiseko, ukusasazeka ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso lezibini zangaphambili.
Ukusasazeka kunxulumene nomrhumo ohlawula ngokungathanga ngqo kurhwebo, kwaye yindlela abarhwebi be-intanethi abenza ngayo imali kwi-intanethi. Ilinganisiwe ngenani le 'pips', ukuqinisa ukusasazeka, kuluncedo ngakumbi kuwe njengomrhwebi.
Ngaba uyathanda ukufumana okungakumbi malunga nokusasazeka kwaye kusebenza njani? Qiniseka ukuba ufunda isikhokelo sethu ngokubanzi Yintoni eyasasazwayo kwi-Forex?
Qaphela: Nangona abanye abathengisi be-forex banikezela ngokusasazeka okunamandla kwiibini zabo eziphambili, kusafuneka uvavanye ukuba ikhomishini ixabisa malini. Konke kulungile kwaye usebenzisa umrhwebi osasazekayo osezantsi, kodwa kuyachaphazeleka ukuba uhlawula ikhomishini ephezulu.
Ngamafutshane, i sasaza Umahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' lezibini zangaphambili, kunye nezo zithengiswayo. Oku kuqinisekisa ukuba umthengisi we-forex ekuthethwa ngaye uhlala esenza inzuzo-nokuba yeyiphi na indlela yentengiso.
Ukusasazeka yindawo ebalulekileyo yokuthetha kwihlabathi le-forex, kungabi ncinane kuba kuya kulawula ukuba uhlawula malini ukuthengisa. Ngamanye amagama, ukusasazeka okuphezulu, kokukhona uhlawula ngokungangqalanga kwimirhumo.
Ngaphambi kokuba sihlolisise ukuba ukusasazeka kubalwa njani 'kwiipips', makhe sijonge umzekelo osisiseko wokucoca inkungu.
Uthengisa nge-USD / CAD
Umthengisi wakho ucaphula ixabiso 'lokuthenga' le-1.31
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.30
Oku kuthetha ukuba umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga nokuthengisa yi-0.76%
Ngokwoku kungasentla, ukuba ubunokubeka i-oda yokuthenga kwi-USD / CAD-okuthetha ukuba uqinisekile ukuba isibini siyonyuka ngexabiso, ungahlawula i-1.31. Nje ukuba iodolo ibekwe, uya kuba bomvu nge-0.76%.
Ngoba? Ewe, kuba ukuba ufuna ukuthengisa isikhundla sakho, kuya kufuneka wenze njalo ngo-1.30. Njengoko oku kungaphantsi kwento oyihlawuleyo, ukusasazeka kukubeka kwimo yokungxamiseka kwangoko nje xa ubeka iodolo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ukhethe ukusasazeka kwe-Forex broker.
Zithini iiPips kwi-Forex?
Ngaphambi kokuba siqonde ngokupheleleyo ukuba ukusasazeka yintoni kwaye kubalwa njani, kufuneka kuqala sifunde malunga 'iipipi'. Isizathu soku kukuba ukuze kuqinisekiswe ububanzi bokusasazeka, thina imfuneko ukubanakho ukulinganisa intshukumo yamaxabiso kwiipips.
Okokuqala nokuphambili, xa sithengisa i-forex kwi-intanethi, sihlala sisenza njalo ukuze sizuze ngokuhamba kwexabiso elincinci. Kananjalo, uninzi lwezibini zangaphambili ziya kuba namanani amane emva kwenqaku lokugqibela. Umzekelo, i-GBP / i-USD inokuba ngamaxabiso kwi-1.3103. Enye yezinto ezimbalwa ngaphandle kwalo mgaqo yi-USD / JPY, eya kumanani amabini kuphela emva kwedesimali.
Nangona kunjalo, ukuba i-GBP / i-USD isukile kwi-1.3103 ukuya 1.3104, Oku kuya kubonisa intshukumo ye-0.0001 USD. Kwilizwe lesigama se-forex, oku kuya kubizwa ngokuba yi-'1 pip '. Ngokufanayo, ukuba ixabiso le-GBP / i-USD lisuke kwi-1.3103 ukuya 1.3098, oku kuya kuba kukuhamba 'kwee-5 iipip'.
Ukubala i-Spead kwiiPips
Ke ngoku uyazi ukuba yintoni sasaza is, nokuba kanjani iipipi zibaliwe, ngoku singakubonisa umzekelo wokwenyani wokusasazeka.
Umzekelo wePips: Ukusasazeka kwe-EUR / USD
Masithi ufuna ukurhweba nge-EUR / USD, kwaye ujonge ukuhamba ixesha elide. Kananjalo, uyakholelwa ukuba i-EUR iyakudlula i-USD, oko kuthetha ukuba inqanaba lotshintshiselwano luya kunyuka.
Ixabiso 'lokuthenga' ngu-1.1389
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.1382
Umahluko wamanani asi-7, ukusasazeka ziipipi ezisixhenxe
Ubeka i-oda yokuthenga kwi-1.1389, okuthetha ukuba ufuna ixabiso le-EUR / USD ukuze unyuse okungenani iipips ze-7 ukuze uphule nje
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, nangona ixabiso lokuthenga lingu-1.1389, uya kudinga ixabiso lokuthengisa ukuze unyuke uye kwi-1.1389 ngaphambi kokuba uqhekeze. Ngaphambi kokuba ifikelele kweli xabiso, kuya kufuneka uphume kurhwebo lwakho ngexabiso eliphantsi kunoko uhlawuleyo.
Kuthekani Ngeepiphethi kwi-Forex?
Ngaphandle kokuzimisela ukukudida nangaphezulu, kuya kufuneka uqonde ukuba zeziphi 'iipipettes'. Kwimeko efanayo neepips, iipipettes zinxulumene nokuhamba kwexabiso elincinci lesibini se-forex. Nangona kunjalo, ngelixa iipips zisekwe kumanani ama-4 emva kwenqaku lokugqibela (2 kwimeko ye-USD / JPY), iipipettes zisebenzisa amanani ama-5.
Umzekelo, endaweni yamaxabiso e-GBP / USD njenge-1.4592 (amanani ama-4), inokujongeka njengokufana no-1.45927 (amanani ama-5). Kananjalo, intshukumo yepipette enye iya kufikelela kwi-1 USD. Udidekile? Sukuba njalo, kuba ubalo lusebenza ngendlela efanayo neepip, nangona, ungeze inani elongezelelweyo kwi.
Umzekelo wePipettes: Ukusasazeka kwe-GBP / USD
Kulo mzekelo, siza kujonga njani Siza kubala i-forex isasazeka kwi-GBP / USD xa umrhwebi esebenzisa iipipettes.
Ixabiso 'lokuthenga' ngu-1.31016
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.31008
Umahluko onamanani asi-8, ukusasazeka ziipayipi ezi-8
Ubeka i-oda yokuthenga kwi-1.31016, okuthetha ukuba udinga ixabiso le-GBP / USD ukunyusa okungenani i-8 iipayipi ukuze uphule
Kumzekelo ongentla, ukusasazeka kwe-Forex ye-GBP / USD ziipayipi ezi-8. Nangona kunjalo, nangona umrhwebi ekuthethwa ngaye esebenzisa inkqubo yombhobho (amanani ama-5 emva kweshumi), ukusasazeka kuhlala kubalwa 'kwiiipips'. Kananjalo, ukusasazeka kuya kuthi ke, kufikelele kwii-0.8 iipips.
Qaphela: Ukuba uyakwazi ukufumana umrhwebi onikezela ngeepips ze-0.8 kwizibini eziphambili ze-forex, oku kukhuphiswano olukhulu. Nangona kunjalo, qiniseka ukujonga ukuba zeziphi iikhomishini zorhwebo oya kucelwa ukuba uzihlawule!
Loluphi usasazo endifanele ndijolise kulo xa ndirhweba nge-Forex?
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ngoku ukubala ukusasazeka kwe-forex kuzo zombini iipip kwaye iipayipi. Ungalibali, nokuba umrhwebi unikezela ngamanani ama-5 emva kwenqaku lokugqibela, sisalibala inani le-forex elisasazeka kwiipips.
Nangona kunjalo, ngoku siza kuphonononga ukuba loluphi uhlobo lokusasazeka ekufuneka ujolise kulo xa usebenzisa i-forex broker. Okokuqala, ububanzi bokusasazeka buya kugqitywa ngababini bezorhwebo.
Umzekelo, ezona zibini ziphambili njenge-GBP / i-USD kunye ne-EUR / USD ziya kuhlala zisasazeka kakhulu kwi-forex kwi-broker oyikhethileyo. Emva koko, uya kuba nabantwana abancinci njenge-GBP / NZD, kunye nezibini ezingaqhelekanga ezifana ne-USD / TRY-enokusasazeka okubanzi.
Isizathu soku kukungabinamali. Ngelixa iimarike zehlabathi zifuna izigidi zeepawundi ezixabisa i-GBP / USD mihla le, izinto ezithandwa yi-USD / TRY zihlala zihlupheka ngenxa yokuthengiswa kwemali Kwaye kwenzeka ntoni xa iimarike zihlupheka ngenxa yamanqanaba aphantsi okufumana imali? Ukuguquguquka kuphezulu. Kananjalo, ukusasazeka kwe-forex yezibini ezingaqhelekanga kuya kuhlala kuphakame kakhulu kunoko kuphezulu.
Ngamanye amaxesha, inani labarhwebi liya kubonelela ngokusasazeka kwe-zero kwiibini zayo eziphambili. Nangona kunjalo, oku kugcinelwe abo baneakhawunti yokuthengisa. Ngaphaya koko, zero zero forex isasaza i-forex broker iya kuthi inikele ngeli xesha lokuma kweeyure kuphela.
Ngaba Ndifanele Ndiqwalasele Izinto Ngaphandle Kokusasazeka?
Kubaluleke kakhulu ukusasazeka kwihlabathi lokurhweba kwangaphambili, oku akufuneki kube sisizathu sakho sokuqala sokujoyina umthengisi omtsha. Ngokuchasene noko, kufuneka ujonge kuluhlu lwezinye izinto eziguquguqukayo. Oku kubandakanya umgaqo, inani lezixhobo onokuzithengisa, kunye nohlobo lweendlela zokuhlawula ezixhasayo.
Nangona kunjalo, kwimeko yokugcina iindleko zakho zincinci, ukusasazeka okuphantsi akusoloko kufikelela kumrhwebi wexabiso eliphambili lomthengisi. Nangona umrhwebi enokuthi anikezele ngokusasazeka okuphantsi kakhulu kwintengiso, inokwenza oku kwezinye iindawo- ezinje ngekhomishini, umrhumo wedipozithi, okanye ngezimali zobusuku.
Nantsi into ekufuneka uyijongile.
Uninzi lwabarhwebi be-forex baya kuhlawulisa ikhomishini yorhwebo ngohlobo oluthile. Oku kuhlala kuyipesenti encinci yemali oyithengisayo. Umzekelo, ukuba umrhwebi uhlawulisa ikhomishini ye-0.3%, kwaye ixabiso lorhwebo lwakho yi- $ 2,000, uya kuthi uhlawule i- $ 6 kwimirhumo. Ngokwesiqhelo kufuneka uhlawule ikhomishini kuzo zombini iziphelo zomyalelo.
Ihlala ilungile xa ukwazi ukugcina imali ekusasazeni. Nangona kunjalo, akukho nto imbi njengokukhetha umrhwebi osasazwayo osezantsi, kuphela ukufumanisa ukuba uya kuhlawuliswa ngokwenza idipozithi kunye nokurhoxa. Kananjalo, jonga ukuba ngaba indlela oyikhethayo yokuhlawula iza nomrhumo wentengiselwano.
Ukuba ujonge ukurhweba ngokunyusa, kuyakufuneka uqaphele iifizi zobusuku ngobusuku. Le yindleko yokuboleka imali kwi-broker, kwaye ihlawuliswa rhoqo iiyure ezingama-24 ogcina indawo ivulekile. Kananjalo, nangona unokuba uhlawula ukusasazeka okuqinileyo kwi-broker, unokuba uhlawula oku xa ufaka isicelo.
Eyona ndawo iphantsi yokuSasaza i-Forex Brokers 2021
Ke ngoku ukuba ukuqonde ngokuqinileyo ukuba ukusasazeka yintoni, kwaye kuya kuba nefuthe elithe ngqo kumandla akho okwenza inzuzo ekuhambeni kwexesha, ngoku siza kudwelisa ezona zikhetho zethu ziphambili ze-3.
Ezi brokers zibonelela ngezinye zezona ndawo zisasazekayo kwindawo yokurhweba yase-UK. Xa sele kuthethiwe oko, qiniseka ukuba wenza uphando olongezelelekileyo kumthengisi ngaphambi kokuba ubhalise.
I-Capital.com yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB elawulwa yi-intanethi ye-intanethi enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Zonke ziluhlobo lwe-CFDs - oku kubandakanya amasheya, i-indices kunye ne-commodities Awuyi kuhlawula nepeni enye kwikhomishini, kwaye i-spreads i-super-tight. Izibonelelo zoxhaso nazo ziyafumaneka - zihambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Isishwankathelo, ukuba usifundile isikhokelo sethu kuyo yonke indlela, kuya kufuneka ube nokuqonda kakuhle ukuba yintoni ukusasazeka, ukubala njani, kwaye kutheni kubalulekile ukuba ubambelele kubarhwebi abanikezela 'ngokuqinileyo' ukusasazeka. Xa kuthethwa oko, akufuneki ukhethe i-forex broker entsha ikakhulu kubungakanani bokusasazeka.
Ngokuchasene noko, umthengisi unokukuhlawulisa kwezinye iindawo zeqonga. Umzekelo, oku kunokubandakanya iikhomishini, ukuxhasa ngemali ubusuku bonke, kunye nemali yokufaka / yokurhoxisa. Kananjalo, soloko usenza uphando oluphuculweyo kumthengisi ngaphambi kokuba ubhalise.